नेपाली चलचित्रका ‘भिलेन’ स्तन क्यान्सरको सचेतनामा
काठमाडौं– नेपाल अबुर्द रोग निवारण संस्थाले अक्टोवर महिनालाई स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाको रुपमा मनाउँने भएको छ । त्यसको जानकारी दिनका लागि संस्थाले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
सम्मेलनमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खलनायकको रुममा परिचित कलाकार सुनिल थापा पनि उपस्थित थिए ।
सचेतना कार्यक्रममा सहभागि भइ नेपाली दर्शकलाई स्तन क्यान्सरको बारेमा सचेत गराउन उनी पनि कार्यक्रम उपस्थित भएका थिए । चलचित्रमा भिलेन भनेर फिल्मका हिरो र हिरोइनलाई दुःख दिने थापा वास्तविकतामा भने नेपाली जनतामा क्यान्सर रोगको चेतना हुनुपर्छ भन्दै जनचेतनामुकल कार्यक्रममा सक्रियता देखाउन थालेका छन् । उनले चलचित्र सुटिङको क्रममा भारतमा रहेको समयमा धेरै नेपालीहरु भारतमा क्यान्सरको उपचारका लागि धाउने गरेको र दुःख पाउने गरेको देखेर क्यान्सर रोगको सचेतनाका लागि सक्रिय बनेको बताए ।
‘क्यान्सरको उपचार गर्न मुम्बइ पुगेका नेपालीहरुलाई त्यहा डलर माग्ने गरेको देखे, मैले आफै त्यहाको अस्पतालसँग कुरा गरेर नेपालीको समयमै उपचार गराउन पनि पहल गरेको छु,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कति नेपालीहरु अहिले क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो गाउँघरमा क्यान्सरको चेतना हुन आवश्यक छ भनेर यसको सचेतनाका लागि म पनि लागेको हुँ ।’
पछिल्लो समय स्तन क्यान्सरका विरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको नेपाल अबुर्द रोग निवारण संस्थाका केन्द्रिय अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए । स्तन क्यान्सरको विषयमा चेतना जगाउन संस्थाले देशभर विविध कार्यक्रम गरि अक्टोवर महिनालाई स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाको रुपमा मनाउन उनले बताए ।
जनचेतनाका कार्यक्रम अन्तरगत असोज २७ गते शनिबाट बिहान भृकुटीमण्डपदेखि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रसम्म ¥याली गरिँदैछ । र्‍यालीमा राष्ट्रिय स्तरका ख्याती प्राप्त कलाकार, स्वास्थ्यमर्की तथा समाजसेवीको सहभागिता रहनेछन् ।
यस्तै असोज ३१ गते बुधबार भक्तmपुरको ध्याम्पे डाडाबाट तीन किसिमका रंग भएको चङ्गा आकाशमा उडाउने र अक्टोवर महिनाभरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा निशूल्क स्तन क्यान्सर परिक्षण शिविर संचालन गरिने बताए ।
स्तन क्यान्सरबाट विश्वभर २० लाख मानिस पीडित बनेका छन् ६ लाखको मृत्यु भइसकेको छ । पहिला पहिला विकसित मुलुकहरुमा मात्रै क्यान्सर रोग लाग्ने गरेकोमा अहिले नेपाल जस्तै विकासशिल मुलुकहरुमा क्यान्सर रोगीका बिरामी बढ्न थालेका छन् । नेपालमा हाल ३० देखि ४० हजार महिलामा स्तन क्यान्सरको समस्या रहेको जनाइएको छ । समयमा रोगको पहिचान र उपचार नपाउँदा क्यान्सरले ज्यानै लिनसक्ने भएकाले स्तन क्यान्सरको विषयमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ ।
असोज १०, २०७५ मा प्रकाशित
स्वास्थ्यलाभका लागि हप्ताको दुई घन्टा जंगलमा बिताउनुस् !
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ?
जुम्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न बाटो खुला
स्वास्थ्यका लागि दूध राम्रो कि दही ?
लामो समयसम्म बसेर काम गर्दा गुम्छ स्मरणशक्ति
मानिसहरू किन नङ टोक्छन् ? मनोवैज्ञानिक छ कारण संसारमा लगभग ६० करोड मानिस नङ टोक्ने गर्छन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, मानिसहरू चिन्तित वा बोर हुँदा अनायासै नङलाई दाँतमुनि पार्छन् । यो एक प्रवृत्ति मात्र हो । नङ चपाउनु गलत...
लघुवित्तकी कर्मचारीको हत्यामा संलग्न पक्राउ, जंगलमा भेटिएको थियो शव
सर्लाही जिल्ला इन्चार्जको मृत्युपछि विप्लव समूहले भन्यो– हत्याको बदला एकीकृत जनक्रान्तिबाटै लिन्छौं
भारतमा बस दुर्घटना : २० को मृत्यु, ३५ जना घाइते
प्रतिपक्षी दलको अवरोधले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित